Umenzi kunye neFektri yeWelding-neck Eyona nto ilunge kakhulu IPuyang
Intsimbi eshushu yentsimbi (WN esisangqa) inentamo enokufudusa uxinzelelo kumbhobho, ke ukunciphisa uxinzelelo oluqokeleleke emazantsi esisangqa. Iyahambelana nemibhobho esebenza kubushushu obuphezulu okanye obusezantsi kwaye ithwala uxinzelelo oluphezulu. Ngokukodwa kumbhobho okanye iivevhe xa i-PN inkulu kune-2.5 MPA.
Izicelo kunye neempawu
1. Luhlobo luni lwezinto eziphathekayo?
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo kunye neAluminiyam
2. Zeziphi iintlobo zohlobo onokubonelela ngazo?
Intsimbi esisangqa ende
Umlenze esisangqa edibeneyo
3. Zeziphi iintlobo zephakheji onokubonelela ngazo?
Amakhreyithi okanye iPallet
4. Yintoni amandla akho emveliso yenyanga?
300TON / Inyanga
5. Leliphi izibuko elikufutshane?
Izibuko loLwandle lwaseShanghai
6. Ngaba uyakwamkela ukuhlolwa kweqela lesithathu?
Nceda uthumele umyalezo wakho kuthi ukuba unemibuzo okanye imibuzo, siya kukuphendula ngaphakathi kweeyure eziyi-12!
Egqithileyo Isisongelo esisangqa
Okulandelayo: Flange eyimfama